Mpanamboatra pu hoditra pu, mpamatsy - mpanamboatra hoditra vita amin'ny hoditra China
Polyurethane Vegan vita amin'ny volon-koditra vita amin'ny hoditra vita amin'ny volon'olombelona
Upholstery fiara PU Material hoditra Polyurethane hoditra sandoka
Ny hoditra vita amin'ny PU dia fitaovana sentetika namboarin'olombelona miaraka amin'ny firafitry ny hoditra, matanjaka sy mateza ary lafo vidy.
Manolotra haingon-trano vita amin'ny hoditra vita amin'ny volony vita amin'ny fiara jiosy i China
Ny hoditra synthetic pu microfiber dia mitazona ny toetra mampiavaka ny hoditra voajanahary toy ny fofonaina, mifoka ny hamandoana, malefaka, azo itondra ary mahazo aina, sns. Manolotra loko mihoatra ny roapolo ho an'ny safidinao izahay.
Fitaovana miendrika Microfiber avo lenta miorina amin'ny hoditra PU amidy
Izy io dia manana tanjaka tsara amin'ny hafanana ambany, fanoherana tsara ny fahanteran'ny fahazavana sy ny fahamendrehana amin'ny hydrolysis.
Ny kalitaon'ny hoditra vita amin'ny otom-borona vita amin'ny otom-bolo tsara indrindra
Fomba roa PU Polyurethane Synthetic hoditra Moistureproof
PU microfiber synthetic leather, hihaona amin'ny fangatahan'ny olona ny hatsarana sy ny fiononana ankapobeny amin'ny akony ao anatiny, ao anatin'izany ny fitaovana anatiny dia mahatsiaro ho malefaka, mahazo aina amin'ny fikitikitihana, ny lamina ary ny volavolan'ny fiara rehetra mifanaraka.
Hoditra pu sy synthetic PU avo lenta ho an'ny haingon-trano anatiny amin'ny fiara
Ny hoditra vita amin'ny solon'ny PU dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny tontolo iainana, aorian'ny fandotoana ireo fitaovana anatiny dia tsy handoto ny tontolo iainana, azo haverina.
Mpanamboatra hoditra PU vita amina fiara vita amin'ny vita vita amin'ny vita amin'ny otom-otrikaina
Ny fitaovana PU fiara vaovao dia manana toetra mekanika tena tsara, fanoherana ny hydrolisis, fanoherana ny hafanana, fanoherana ny oksizena ary ny fanoherana ny fitafiana dia be mpampiasa amin'ny fitaovam-piadiana fiara, seza, mpiambina varavarana ary lafiny hafa.